ဘုရားရှငျ လကျထကျတျောမှာ ကောသလမငျးကွီးက အိပျမကျ ၁၆ခကျြ မကျတော့ ဘုရားရှငျထံ မေးမွနျးရာ - Tameelay
ဘုရားရှငျ လကျထကျတျောမှာ ကောသလမငျးကွီးက အိပျမကျ ၁၆ခကျြ မကျတော့ ဘုရားရှငျထံ မေးမွနျးရာ
May 4, 2020 by Tameelay
အဆိုပါ အခကျြ ၁၆ခကျြက နောငျအနာဂတျမှာ ဖွဈပျေါလာမယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အခုဆိုရငျ အခြို့ အခကျြတှေ ဖွဈပျေါနပွေီလို့ ဆိုနိုငျနပေါတယျ။
အဆိုပါ ၁၆ ခကျြကတော့ . . .
(၁) အရပျလေးမကျြနှာမှ လေးခုသော နှားလား ဥသဘတို့သညျ လာလတျ၍ မငျးရငျပွငျ၌ ဝှမေ့ညျဟု တှနျမွညျ ကွုံးဝါးလကျြ မဝှပေဲ့သာလြှငျ ဖဲလကေုနျ၏။
နောငျအခါ တရားမစောငျ့သော မငျးတို့ လကျထကျ၌ အရပျလေးမကျြနှာမှ မိုးတို့သညျ ရှာအံသကဲ့သို့ ထဈကွိုးလကျြ မရှာပဲသာလြှငျ ပြောကျပကျြ ကုနျလတ်တံ့။
ထိုအခါ ကာကျပဲသီးနှံတို့ ပကျြဆီး၍ လူတို့၌ အစာရစော ရှားပါး ငတျမှတျခွငျး ဖွဈလတ်တံ့။
(၂) နုနယျသေးငယျစှာသော အပငျတို့သညျ ပှငျ့ကွ သီးကွကုနျ၏။
နောငျအခါ ဆုတျယုတျသောကာလ လူတို့ အသကျတနျး တိုသော ကာလ၌ ယောင်ျကြား မိနျးမတို့သညျ ထကျသနျ ပွငျးသော ရာဂ ရှိကုနျသညျ ဖွဈ၍ ငယျရှယျစဉျ အခါ၌ပငျ အိမျထောငျပွုခွငျး၊ သားမှေးခွငျး တို့ကို ပွုကုနျလတ်တံ့။
(၃) နှားမကွီးတို့သညျ မိမိတို့ မှေးစဖွဈသော နှားမငယျတို့၏ နို့ကို စို့သညျဟု မွငျမကျပါသညျ။
နောငျအခါ ကွီးသောသူတို့အား အရိုအသပွေုခွငျး ပြောကျကှယျသော ကာလ၌ အမိအဖ၊ ယောက်ခမ စသူတို့သညျ ကိုးကှယျရာ မရှိကုနျသညျ ဖွဈသဖွငျ့ မိမိတို့၏ သားသမီး သားမကျ ခြှေးမ စသူတို့ထံ၌ ကပျရပျ၍ ငွိုငွငျ ညှိုးငယျစှာ အသကျမှေးရကုနျလတ်တံ့။
(၄) လှညျးတို့၌ ဝနျကို ဆောငျနိုငျသော နှားကွီးတို့ကို မကမူ၍ နှားငယျတို့ကိုသာ ကစကေုနျ၏။
နှားငယျတို့လညျး ဝနျကို မနိုငျ၍လှညျးတို့ကိုလညျး ဆှဲခွငျးငှာ မတတျနိုငျကုနျ၏။
နောငျ တရားမစောငျ့သော မငျးတို့ လကျထကျ၌ အသကျကွီး ဝါကွီး ပညာရှိကုနျသော သူတို့အား အမတျ၊ တရားသူကွီး စသော ရာထူးစညျးစိမျတို့၌ မခနျ့ထားမူ၍ အသကျ၊ ဝါ၊ ပညာ ငယျကုနျသော လူငယျတို့အားသာ ခနျ့ထားကွလတ်တံ့။
ထိုအခါအခှငျ့အရေးမသိ၊ မတျော မမှနျဖွဈ၍ အမှု မပွီး၊ အကြိုးမပွီး ရှိသောအခါ လူငယျတို့သညျ မိမိတို့၏ ရာထူး စညျးစိမျကို စှနျ့ကွလတ်တံ့။
လူကွီးတို့သညျလညျး ငါတို့မှာ ပွငျပကသာ ဖွဈ၏ဟု လဈြလြှုပွု၍ နကွေလကုနျလတ်တံ့။ သို့ဖွဈ၍ တရားမစောငျ့ အမှုမပွီးကွသညျနှငျ့ မငျးနှငျ့တကှ တိုငျးပွညျပါ ဆုတျယုတျ ပကျြဆီးကွလတ်တံ့။
(၅) ခံတှငျး နှဈခုရှိသော မွငျးသညျ ကြှေးလာသော မုယောစပါး စသညျတို့ကို ခံတှငျးနှဈခုဖွငျ့ပငျ စားကုနျ၏။
နောငျ တရားမစောငျ့သော မငျးတို့လကျထကျ၌ တရားမစောငျ့သော တရားသူကွီးတို့သညျ နှဈဖကျသော အမှုသညျတို့မှ ပေးသော တံစိုးလကျဆောငျတို့ကို စား၍ အမှုတို့ကို မှနျမကနျ ဆုံးဖွတျကွကုနျလတ်တံ့။
(၆) အဖိုးတသိနျး ထိုကျသော ရှခှေကျကို မွခှေေးဖိုအား ကငျြငယျစှနျ့ရနျ ပေး၏။ မွခှေေးလညျး ထိုရှခှေကျ၌ ကငျြငယျစှနျ့၏။
နောငျ တရားမစောငျ့သော မငျးတို့ လကျထကျ၌ အမြိုးမွတျသော သူတို့သညျ အခြီးအမွှောကျ မခံရ၊ ဆငျးရဲကွ၍ အမြိုးယုတျသော သူတို့ အစိုးတရ ကွှယျဝ ခမျြးသာကွလတ်တံ့။
ထိုအခါ အမြိုးမွတျတို့ အသကျ မှေးခွငျးငှာမတတျနိုငျကုနျသညျ ဖွဈ၍ မိမိတို့ သမီးတို့ကို အမြိုးယုတျတို့အား ပေး၍ အသကျမှေး ကွကုနျလတ်တံ့။
(၇) တယောကျသော ယောင်ျကြားသညျ အငျးပဉျြ၌ ထိုငျလကျြ လှနျကို ကဈြ၍ ခွရေငျး၌ ထား၏။ ထို အငျးပဉျြအောကျ၌ရှိသော ဆာလောငျသော မွခှေေးမသညျ ထိုယောင်ျကြား မသိစဉျလြှငျ ထိုလှနျကို စား၏။
နောငျအခါ မိနျးမတို့သညျ အစားအသောကျ၊ အဝတျ၊ အနအေထိုငျ စသညျတို့၌ လျောလညျခွငျး ရှိ၍ မိမိတို့ လငျယောင်ျကြားသညျ ဆငျးရဲငွိုငွငျစှာ ရှာဖှေ စုဆောငျးအပျသော ဥစ်စာ ပစ်စညျးတို့ကို အဝတျအစား၊ အစားအသောကျ တို့၌ လညျးကောငျး၊ သောကျစားကစားခွငျးတို့၌ လညျးကောငျး၊ အပြျောအပါးတို့၌ လညျးကောငျး၊ သဘောကျ လငျငယျထားခွငျး တို့၌ လညျးကောငျး အရမျးမဲ့လြှငျ ဖွုနျးတီးလလေတ်တံ့။ ခှေးမသညျ မသိ စဉျးစား သကဲ့သို့ အိမျသူ မိနျးမတို့သညျ ဤသို့ တိတျတဆိတျ ဖွုနျးတီး ခိုးစားကွလတ်တံ့။
(၈) ရမေရှိသော အိုးတို့ဖွငျ့ ခွံရံအပျသော ရပွေညျ့အိုးကွီး တလုံးကို မွငျရ၏။ လူတို့သညျ အရပျ ၈ မကျြနှာမှ ရကေို ယူလာကွ၍ ထိုရပွေညျ့အိုးကွီး အတှငျးသို့သာလြှငျ လောငျးထညျ့ ကွ၏။ လောငျးထညျ့သော ရတေို့သညျ ပွညျ့လြှံ၍ ကကြုနျ၏။ ဤသို့လြှငျ အဖနျ တလဲလဲ ရပွေညျ့အိုးသို့သာ လောငျးလြှကျ ရမေရှိသော အခွံအရံ အိုးတို့ အတှငျးသို့ကား မညျသူမြှ မလောငျး မထညျ့ပဲ နေ၏။
နောငျအခါ မကောငျးသော မငျးတို့ လကျထကျ၌ မငျးနှငျ့တကှ လူတို့ တရားပကျြကှကျ၊ သွဇာညံ့ဖငျြး၊ ဆငျးရဲခွငျးသို့ ရောကျကွကုနျလတ်တံ့။ ထိုအခါ မငျးအစိုးရတို့သညျ ဆငျးရဲသားတို့အား မငျး၏ အကြိုးစီးပှား အတှကျကိုသာ လုပျကိုငျစအေံ။ ဆောငျရှကျ စအေံ။ ထမျးရှကျစအေံ။ သို့ဖွဈရကား မငျးတို့၌သာ ပွညျ့စုံ အကြိုးခံစားကွရ၍ ဆငျးရဲသားတို့မှာ ရမေရှိသော အိုးတို့ပမာ တစုံတရာ မရှိ ငတျမှတျ ခေါငျးပါးခွငျးသို့ ရောကျကုနျလတ်တံ့။
(၉) နကျရှိုငျး ကယျြဝနျးသော ရကေနျကွီး တခုတှငျ သတ်တဝါတို့ ဆငျး၍ ရသေောကျကွ၏။ ကနျ၏ အလယျ ရနေကျရာ၌ ရသေညျ နောကျ၍ ကနျနားဝနျးကငျြ ရတေိမျရာ သတ်တဝါတို့ နငျးရာ၌ ရသေညျ ကွညျလငျ၏။
နောငျအခါ တရားမစောငျ့သော မငျးတို့သညျ မတရား အုပျစိုးခွငျး၊ တံစိုးစားခွငျး၊ လျောလညျခွငျး၊ သနားညှာတာ ဂရုဏာ မဲ့ခွငျး၊ ကွမျးကွုတျရကျစကျခွငျးတို့ ရှိလြှကျ လူတို့အပျေါ၌ အထူးထူး အပွားပွားသော အခငျြးအရာဖွငျ့ အခှနျအတုတျတို့ကို ခှဲခနျ့ ကောကျယူလတ်တံ့။
ထိုအခါ လူတို့မှာ တဈစုံတဈရာ မပေးဆောငျနိုငျ ပငျပနျးဆငျးရဲလကျြ မွို့ကွီးရပျကွီးတို့၌ မနနေိုငျပဲ ရပျစှနျ ပွညျနားသို့ သှားရောကျနကွေရသညျ ဖွဈလတ်တံ့။
ကနျအလယျတှငျနောကျ၍ ကနျဘေးတှငျ ကွညျသကဲ့သို့ မွို့လယျရှာလယျ၌တိတျဆိတျ၍ ရပျစှနျပွညျနား၌ လူစညျကားလတ်တံ့။
(၁၀) တဈလုံးတညျးသော အိုးဖွငျ့ တခြိနျတညျးခကျြသော ထမငျးသညျ အခြို့ပြော့၏၊ အခြို့ မနပျ၊ အခြို့နပျ၏။
နောငျ တရား မစောငျ့သော မငျးတို့ လကျထကျ၌ မိုးကှကျကွား ရှာလတ်တံ့။ ထိုအခါ အခြို့နရော၌ မိုးရှာလှနျး၍ ကောကျပဲသီးနှံ ပကျြအံ။ အခြို့နရော၌ မရှာ၍ ပကျြအံ။
အခြို့နရော တှငျကား မိုးမှနျ၍ ကောငျးအံ။ ဤသို့လြှငျ ထမငျးအိုးတှငျ မွငျသော ထမငျးကဲ့သို့ ကောကျပဲသီးနှံ သုံးထှေ ပွားလတ်တံ့။
(၁၁) အဖိုးတသိနျးထကျသော စန်ဒကူးနှဈကို ယကျတကျပုပျရညျဖွငျ့ ရောငျးစားကုနျ၏။
နောငျအခါ ငါဘုရား၏ သာသနာတျော ဆုတျယုတျသော ကာလတှငျ လျောလညျ၍ လာဘျလာဘကို မကျမော ကုနျသော ရဟနျးအလဇ်ဇီ လူအလဇ်ဇီတို့သညျ ဆှမျး၊ ဆေး၊ ကြောငျး၊ သင်ျကနျး ဥစ်စာပစ်စညျး စသညျ တို့ကို အလိုရှိကုနျသညျ ဖွဈ၍ လမျးခရီးဆုံ၊ အိမျဝ၊ အိမျကွို အိမျကွားတို့၌ ငါဘုရား၏ တရားတျောကို ဟောကွားလတ်တံ့။ နိဗ်ဗာနျ အလို့ငှာ ဟောတျော မူအပျသော အလှနျ မှနျမွတျသော တရားတျောကို တဈပဲ၊ တဈမူး၊ တဈကပျြ စသညျတို့ အကြိုးငှာ ရောငျးစား ဟောပွော ကွသညျ ဖွဈ၍ တသိနျးထိုကျသော စန်ဒာကူးနှဈကို ယကျတကျပုပျရညျဖွငျ့ ရောငျးစား သကဲ့သို့ ဖွဈကုနျလတ်တံ့။
(၁၂) ဘူးတောငျးတို့သညျ ရေ၌ နဈကုနျ၏။
နောငျအခါ တရား မစောငျ့သော မငျးတို့ လကျထကျ၌ အမြိုးယုတျသော သူတို့ကိုသာ ရာထူး စညျးစိမျ ပေးသညျ ဖွဈ၍ အမြိုးယုတျတို့ တနျခိုး အာဏာ ကွီးမား ထငျပျေါ အရာရာတှငျ တှငျကယျြလကျြ ၎င်းငျးတို့ စကားသာလြှငျ ဘုးတောငျး နဈသကဲသို့ နဈ၍ တညျကုနျလတ်တံ့။
(၁၃) ကြောကျဖြာကွီး ရတှေငျပျေါ၏။
နောငျအခါ တရား မစောငျ့သော မငျးတို့ လကျထကျ၌ တျောမှနျ လိမ်မာ ပညာရှိသော သူတို့၏ စကားသညျ မညျသညျ့ အရာ၌ မဆို လေးသော ကြောကျဖြာ ရတှေငျ ပျေါသကဲ့သို့ နဈတညျ ခွငျးမရှိ၊ မခိုငျမမွဲ ရှိကွကုနျ လတ်တံ့။
(၁၄) ဖားငယျမ တို့သညျ ကွီးစှာသော မွှဟေောကျကွီးမြားကို စားမွိုကုနျ၏။
နောငျအခါ လူတို့သညျ ပွငျးသော ရာဂ ရှိကုနျသညျ ဖွဈ၍ ကိလသော အလိုသို့ လိုကျလကျြ ငယျရှယျကုနျသော မယားတို့၏ အလိုသို့ လုံးဝ လိုကျကွကုနျ လတ်တံ့။ အလုပျအကိုငျမှု၊ ဥစ်စာ ပစ်စညျးမှု၊ ကြေးကြှနျမှု၊ စီမံခနျ့ခှဲမှု စသော အရပျရပျတို့၌ လငျပျေါတှငျ လှမျးမိုး အုပျစိုးခွငျးကို ပွုကွမညျ ဖွဈရကား ဖားငယျမသညျ အဆိပျလငျြသော မွှကေို စားမြိုသကဲ့သို့ ဖွဈကုနျလတ်တံ့။
(၁၅) မညျးနကျ ရုပျသှငျ၊ အဆငျး ဆိုးဝါးသော ကြီးတို့ကို ရှေ၏ အဆငျးနှငျ့ တူသော ရှဟေင်ျသာ တို့က ခွံရံ နကွေကုနျ၏။
နောငျအခါ အားနညျးသော မငျးတို့ လကျထကျ၌ ထိုမငျးတို့သညျ ဆငျစီး မွငျးစီးစသော အတတျတို့၌ မလိမ်မာ၍ စဈထိုးခွငျး၌ မရဲရငျ့ဘဲ ဖွဈကွကုနျလတ်တံ့။ ထိုအခါ တိုငျးပွညျ နိုငျငံ ဆုံးရှုံးမညျကို စိုး၍ တူသော ဇာတျရှိသော သူကောငျးသားတို့အား အစိုးရခွငျးကို မပေးမူ၍ မိမိတို့ထံ၌ ခစား ကွကုနျသော အမြိုးယုတျသော ကြေးကြှနျတို့အားသာ ပေးကုနျလတ်တံ့။
သို့ဖွဈ၍ အမြိုးကောငျးသားတို့ ကိုးကှယျရာ မရှိပဲ အစိုးရခွငျး၌ တညျကုနျသော အမြိုးယုတျတို့ထံ၌ ခစားကွကုနျလတ်တံ့။
(၁၆) ဆိတျတို့သညျ သဈကို သတျစားကွသဖွငျ့ သဈတို့သညျ ကွောကျလနျ့လကျြ ဆိတျတို့ကို အဝေးမှ မွငျလြှငျပငျ တောခြုံရှိရာသို့ ပွေးကွကုနျ၏။
နောငျအခါ တရား မစောငျ့သော မငျးတို့ လကျထကျ၌ အမြိုးယုတျသော သူတို့ အစိုးရ ကုနျသညျ ဖွဈ၍ အမြိုးမွတျသူတို့ မထငျရှား ဖွဈလတ်တံ့။ အမြိုးယုတျသူတို့မှာ မငျးကြှမျးဝငျသညျ ဖွဈ၍ တရားရုံးတို့၌ သွဇာအာဏာ လှမျးမိုးလကျြ အမြိုးမွတျသူတို့၏ ဘိုးဘပိုငျ လယျမွေ ဥစ်စာ အရပျရပျတို့ကို ငါတို့ လယျမွဥေစ်စာ ဖွဈသညျဟု သိမျးယူကွ၍ တရားတဘောငျ ဖွဈလြှငျ တနျခိုးမဲ့သူတို့အား ဖိနှိပျပုတျခတျ ခွိမျးခွောကျ နှငျထုတျလကျြ အနိုငျကငျြ့ ကွကုနျလတ်တံ့။ ထိုအခါ အမြိုးမွတျသူတို့ ကွောကျလနျ့ စကျဆုတျကုနျသညျ ဖွဈ၍ လယျယာ ဥစ်စာတို့ကို ပေးအပျကုနျလကျြ အိမျသို့ပွနျ၍ အိပျနကွေကုနျအံ။
ထိုမှ တပါးလညျး အကငျြ့သီလရှိသော ရဟနျးတို့သညျ အကငျြ့သီလမဲ့သော ရဟနျးတို့က ခြုပျခယျြ ဖိနှိပျကွလသေဖွငျ့ တောသို့ ပွေးဝငျ ပုနျးအောငျး ကွကုနျလတ်တံ့။ ဤသို့လြှငျ အမြိုးကောငျး၊ သူတျောကောငျး တို့လညျး လှတျရာ ကြှတျရာ တောတောတောငျတောငျ တို့ကို ပွေးပုနျးကွကုနျလတ်တံ့။
အမြိုးသား ပညာဝနျ ဦးဖိုးကြား၏ ငါးရာ့ငါးဆယျ ကောကျနုတျခကျြမြား (ပထမတှဲ)
ဘုရားရှင် လက်ထက်တော်မှာ ကောသလမင်းကြီးက အိပ်မက် ၁၆ချက် မက်တော့ ဘုရားရှင်ထံ မေးမြန်းရာ
အဆိုပါ အချက် ၁၆ချက်က နောင်အနာဂတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုဆိုရင် အချို့ အချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေပြီလို့ ဆိုနိုင်နေပါတယ်။
အဆိုပါ ၁၆ ချက်ကတော့ . . .
(၁) အရပ်လေးမျက်နှာမှ လေးခုသော နွားလား ဥသဘတို့သည် လာလတ်၍ မင်းရင်ပြင်၌ ဝှေ့မည်ဟု တွန်မြည် ကြုံးဝါးလျက် မဝှေ့ပဲသာလျှင် ဖဲလေကုန်၏။
နောင်အခါ တရားမစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အရပ်လေးမျက်နှာမှ မိုးတို့သည် ရွာအံသကဲ့သို့ ထစ်ကြိုးလျက် မရွာပဲသာလျှင် ပျောက်ပျက် ကုန်လတ္တံ့။
ထိုအခါ ကာက်ပဲသီးနှံတို့ ပျက်ဆီး၍ လူတို့၌ အစာရေစာ ရှားပါး ငတ်မွတ်ခြင်း ဖြစ်လတ္တံ့။
(၂) နုနယ်သေးငယ်စွာသော အပင်တို့သည် ပွင့်ကြ သီးကြကုန်၏။
နောင်အခါ ဆုတ်ယုတ်သောကာလ လူတို့ အသက်တန်း တိုသော ကာလ၌ ယောင်္ကျား မိန်းမတို့သည် ထက်သန် ပြင်းသော ရာဂ ရှိကုန်သည် ဖြစ်၍ ငယ်ရွယ်စဉ် အခါ၌ပင် အိမ်ထောင်ပြုခြင်း၊ သားမွေးခြင်း တို့ကို ပြုကုန်လတ္တံ့။
(၃) နွားမကြီးတို့သည် မိမိတို့ မွေးစဖြစ်သော နွားမငယ်တို့၏ နို့ကို စို့သည်ဟု မြင်မက်ပါသည်။
နောင်အခါ ကြီးသောသူတို့အား အရိုအသေပြုခြင်း ပျောက်ကွယ်သော ကာလ၌ အမိအဖ၊ ယောက္ခမ စသူတို့သည် ကိုးကွယ်ရာ မရှိကုန်သည် ဖြစ်သဖြင့် မိမိတို့၏ သားသမီး သားမက် ချွေးမ စသူတို့ထံ၌ ကပ်ရပ်၍ ငြိုငြင် ညှိုးငယ်စွာ အသက်မွေးရကုန်လတ္တံ့။
(၄) လှည်းတို့၌ ဝန်ကို ဆောင်နိုင်သော နွားကြီးတို့ကို မကမူ၍ နွားငယ်တို့ကိုသာ ကစေကုန်၏။
နွားငယ်တို့လည်း ဝန်ကို မနိုင်၍လှည်းတို့ကိုလည်း ဆွဲခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ကုန်၏။
နောင် တရားမစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အသက်ကြီး ဝါကြီး ပညာရှိကုန်သော သူတို့အား အမတ်၊ တရားသူကြီး စသော ရာထူးစည်းစိမ်တို့၌ မခန့်ထားမူ၍ အသက်၊ ၀ါ၊ ပညာ ငယ်ကုန်သော လူငယ်တို့အားသာ ခန့်ထားကြလတ္တံ့။
ထိုအခါအခွင့်အရေးမသိ၊ မတော် မမှန်ဖြစ်၍ အမှု မပြီး၊ အကျိုးမပြီး ရှိသောအခါ လူငယ်တို့သည် မိမိတို့၏ ရာထူး စည်းစိမ်ကို စွန့်ကြလတ္တံ့။
လူကြီးတို့သည်လည်း ငါတို့မှာ ပြင်ပကသာ ဖြစ်၏ဟု လျစ်လျှုပြု၍ နေကြလကုန်လတ္တံ့။ သို့ဖြစ်၍ တရားမစောင့် အမှုမပြီးကြသည်နှင့် မင်းနှင့်တကွ တိုင်းပြည်ပါ ဆုတ်ယုတ် ပျက်ဆီးကြလတ္တံ့။
(၅) ခံတွင်း နှစ်ခုရှိသော မြင်းသည် ကျွေးလာသော မုယောစပါး စသည်တို့ကို ခံတွင်းနှစ်ခုဖြင့်ပင် စားကုန်၏။
နောင် တရားမစောင့်သော မင်းတို့လက်ထက်၌ တရားမစောင့်သော တရားသူကြီးတို့သည် နှစ်ဖက်သော အမှုသည်တို့မှ ပေးသော တံစိုးလက်ဆောင်တို့ကို စား၍ အမှုတို့ကို မှန်မကန် ဆုံးဖြတ်ကြကုန်လတ္တံ့။
(၆) အဖိုးတသိန်း ထိုက်သော ရွှေခွက်ကို မြေခွေးဖိုအား ကျင်ငယ်စွန့်ရန် ပေး၏။ မြေခွေးလည်း ထိုရွှေခွက်၌ ကျင်ငယ်စွန့်၏။
နောင် တရားမစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အမျိုးမြတ်သော သူတို့သည် အချီးအမြှောက် မခံရ၊ ဆင်းရဲကြ၍ အမျိုးယုတ်သော သူတို့ အစိုးတရ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာကြလတ္တံ့။
ထိုအခါ အမျိုးမြတ်တို့ အသက် မွေးခြင်းငှာမတတ်နိုင်ကုန်သည် ဖြစ်၍ မိမိတို့ သမီးတို့ကို အမျိုးယုတ်တို့အား ပေး၍ အသက်မွေး ကြကုန်လတ္တံ့။
(၇) တယောက်သော ယောင်္ကျားသည် အင်းပျဉ်၌ ထိုင်လျက် လွန်ကို ကျစ်၍ ခြေရင်း၌ ထား၏။ ထို အင်းပျဉ်အောက်၌ရှိသော ဆာလောင်သော မြေခွေးမသည် ထိုယောင်္ကျား မသိစဉ်လျှင် ထိုလွန်ကို စား၏။
နောင်အခါ မိန်းမတို့သည် အစားအသောက်၊ အဝတ်၊ အနေအထိုင် စသည်တို့၌ လော်လည်ခြင်း ရှိ၍ မိမိတို့ လင်ယောင်္ကျားသည် ဆင်းရဲငြိုငြင်စွာ ရှာဖွေ စုဆောင်းအပ်သော ဥစ္စာ ပစ္စည်းတို့ကို အဝတ်အစား၊ အစားအသောက် တို့၌ လည်းကောင်း၊ သောက်စားကစားခြင်းတို့၌ လည်းကောင်း၊ အပျော်အပါးတို့၌ လည်းကောင်း၊ သဘောက် လင်ငယ်ထားခြင်း တို့၌ လည်းကောင်း အရမ်းမဲ့လျှင် ဖြုန်းတီးလေလတ္တံ့။ ခွေးမသည် မသိ စဉ်းစား သကဲ့သို့ အိမ်သူ မိန်းမတို့သည် ဤသို့ တိတ်တဆိတ် ဖြုန်းတီး ခိုးစားကြလတ္တံ့။
(၈) ရေမရှိသော အိုးတို့ဖြင့် ခြံရံအပ်သော ရေပြည့်အိုးကြီး တလုံးကို မြင်ရ၏။ လူတို့သည် အရပ် ၈ မျက်နှာမှ ရေကို ယူလာကြ၍ ထိုရေပြည့်အိုးကြီး အတွင်းသို့သာလျှင် လောင်းထည့် ကြ၏။ လောင်းထည့်သော ရေတို့သည် ပြည့်လျှံ၍ ကျကုန်၏။ ဤသို့လျှင် အဖန် တလဲလဲ ရေပြည့်အိုးသို့သာ လောင်းလျှက် ရေမရှိသော အခြံအရံ အိုးတို့ အတွင်းသို့ကား မည်သူမျှ မလောင်း မထည့်ပဲ နေ၏။
နောင်အခါ မကောင်းသော မင်းတို့ လက်ထက်၌ မင်းနှင့်တကွ လူတို့ တရားပျက်ကွက်၊ သြဇာညံ့ဖျင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်ကြကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ မင်းအစိုးရတို့သည် ဆင်းရဲသားတို့အား မင်း၏ အကျိုးစီးပွား အတွက်ကိုသာ လုပ်ကိုင်စေအံ။ ဆောင်ရွက် စေအံ။ ထမ်းရွက်စေအံ။ သို့ဖြစ်ရကား မင်းတို့၌သာ ပြည့်စုံ အကျိုးခံစားကြရ၍ ဆင်းရဲသားတို့မှာ ရေမရှိသော အိုးတို့ပမာ တစုံတရာ မရှိ ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးခြင်းသို့ ရောက်ကုန်လတ္တံ့။
(၉) နက်ရှိုင်း ကျယ်ဝန်းသော ရေကန်ကြီး တခုတွင် သတ္တဝါတို့ ဆင်း၍ ရေသောက်ကြ၏။ ကန်၏ အလယ် ရေနက်ရာ၌ ရေသည် နောက်၍ ကန်နားဝန်းကျင် ရေတိမ်ရာ သတ္တဝါတို့ နင်းရာ၌ ရေသည် ကြည်လင်၏။
နောင်အခါ တရားမစောင့်သော မင်းတို့သည် မတရား အုပ်စိုးခြင်း၊ တံစိုးစားခြင်း၊ လော်လည်ခြင်း၊ သနားညှာတာ ဂရုဏာ မဲ့ခြင်း၊ ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်ခြင်းတို့ ရှိလျှက် လူတို့အပေါ်၌ အထူးထူး အပြားပြားသော အချင်းအရာဖြင့် အခွန်အတုတ်တို့ကို ခွဲခန့် ကောက်ယူလတ္တံ့။
ထိုအခါ လူတို့မှာ တစ်စုံတစ်ရာ မပေးဆောင်နိုင် ပင်ပန်းဆင်းရဲလျက် မြို့ကြီးရပ်ကြီးတို့၌ မနေနိုင်ပဲ ရပ်စွန် ပြည်နားသို့ သွားရောက်နေကြရသည် ဖြစ်လတ္တံ့။
ကန်အလယ်တွင်နောက်၍ ကန်ဘေးတွင် ကြည်သကဲ့သို့ မြို့လယ်ရွာလယ်၌တိတ်ဆိတ်၍ ရပ်စွန်ပြည်နား၌ လူစည်ကားလတ္တံ့။
(၁၀) တစ်လုံးတည်းသော အိုးဖြင့် တချိန်တည်းချက်သော ထမင်းသည် အချို့ပျော့၏၊ အချို့ မနပ်၊ အချို့နပ်၏။
နောင် တရား မစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ မိုးကွက်ကြား ရွာလတ္တံ့။ ထိုအခါ အချို့နေရာ၌ မိုးရွာလွန်း၍ ကောက်ပဲသီးနှံ ပျက်အံ။ အချို့နေရာ၌ မရွာ၍ ပျက်အံ။
အချို့နေရာ တွင်ကား မိုးမှန်၍ ကောင်းအံ။ ဤသို့လျှင် ထမင်းအိုးတွင် မြင်သော ထမင်းကဲ့သို့ ကောက်ပဲသီးနှံ သုံးထွေ ပြားလတ္တံ့။
(၁၁) အဖိုးတသိန်းထက်သော စန္ဒကူးနှစ်ကို ယက်တက်ပုပ်ရည်ဖြင့် ရောင်းစားကုန်၏။
နောင်အခါ ငါဘုရား၏ သာသနာတော် ဆုတ်ယုတ်သော ကာလတွင် လော်လည်၍ လာဘ်လာဘကို မက်မော ကုန်သော ရဟန်းအလဇ္ဇီ လူအလဇ္ဇီတို့သည် ဆွမ်း၊ ဆေး၊ ကျောင်း၊ သင်္ကန်း ဥစ္စာပစ္စည်း စသည် တို့ကို အလိုရှိကုန်သည် ဖြစ်၍ လမ်းခရီးဆုံ၊ အိမ်ဝ၊ အိမ်ကြို အိမ်ကြားတို့၌ ငါဘုရား၏ တရားတော်ကို ဟောကြားလတ္တံ့။ နိဗ္ဗာန် အလို့ငှာ ဟောတော် မူအပ်သော အလွန် မွန်မြတ်သော တရားတော်ကို တစ်ပဲ၊ တစ်မူး၊ တစ်ကျပ် စသည်တို့ အကျိုးငှာ ရောင်းစား ဟောပြော ကြသည် ဖြစ်၍ တသိန်းထိုက်သော စန္ဒာကူးနှစ်ကို ယက်တက်ပုပ်ရည်ဖြင့် ရောင်းစား သကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်လတ္တံ့။
(၁၂) ဘူးတောင်းတို့သည် ရေ၌ နစ်ကုန်၏။
နောင်အခါ တရား မစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အမျိုးယုတ်သော သူတို့ကိုသာ ရာထူး စည်းစိမ် ပေးသည် ဖြစ်၍ အမျိုးယုတ်တို့ တန်ခိုး အာဏာ ကြီးမား ထင်ပေါ် အရာရာတွင် တွင်ကျယ်လျက် ၄င်းတို့ စကားသာလျှင် ဘုးတောင်း နစ်သကဲသို့ နစ်၍ တည်ကုန်လတ္တံ့။
(၁၃) ကျောက်ဖျာကြီး ရေတွင်ပေါ်၏။
နောင်အခါ တရား မစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ တော်မှန် လိမ္မာ ပညာရှိသော သူတို့၏ စကားသည် မည်သည့် အရာ၌ မဆို လေးသော ကျောက်ဖျာ ရေတွင် ပေါ်သကဲ့သို့ နစ်တည် ခြင်းမရှိ၊ မခိုင်မမြဲ ရှိကြကုန် လတ္တံ့။
(၁၄) ဖားငယ်မ တို့သည် ကြီးစွာသော မြွေဟောက်ကြီးများကို စားမြိုကုန်၏။
နောင်အခါ လူတို့သည် ပြင်းသော ရာဂ ရှိကုန်သည် ဖြစ်၍ ကိလေသာ အလိုသို့ လိုက်လျက် ငယ်ရွယ်ကုန်သော မယားတို့၏ အလိုသို့ လုံးဝ လိုက်ကြကုန် လတ္တံ့။ အလုပ်အကိုင်မှု၊ ဥစ္စာ ပစ္စည်းမှု၊ ကျေးကျွန်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု စသော အရပ်ရပ်တို့၌ လင်ပေါ်တွင် လွှမ်းမိုး အုပ်စိုးခြင်းကို ပြုကြမည် ဖြစ်ရကား ဖားငယ်မသည် အဆိပ်လျင်သော မြွေကို စားမျိုသကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်လတ္တံ့။
(၁၅) မည်းနက် ရုပ်သွင်၊ အဆင်း ဆိုးဝါးသော ကျီးတို့ကို ရွှေ၏ အဆင်းနှင့် တူသော ရွှေဟင်္သာ တို့က ခြံရံ နေကြကုန်၏။
နောင်အခါ အားနည်းသော မင်းတို့ လက်ထက်၌ ထိုမင်းတို့သည် ဆင်စီး မြင်းစီးစသော အတတ်တို့၌ မလိမ္မာ၍ စစ်ထိုးခြင်း၌ မရဲရင့်ဘဲ ဖြစ်ကြကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ တိုင်းပြည် နိုင်ငံ ဆုံးရှုံးမည်ကို စိုး၍ တူသော ဇာတ်ရှိသော သူကောင်းသားတို့အား အစိုးရခြင်းကို မပေးမူ၍ မိမိတို့ထံ၌ ခစား ကြကုန်သော အမျိုးယုတ်သော ကျေးကျွန်တို့အားသာ ပေးကုန်လတ္တံ့။
သို့ဖြစ်၍ အမျိုးကောင်းသားတို့ ကိုးကွယ်ရာ မရှိပဲ အစိုးရခြင်း၌ တည်ကုန်သော အမျိုးယုတ်တို့ထံ၌ ခစားကြကုန်လတ္တံ့။
(၁၆) ဆိတ်တို့သည် သစ်ကို သတ်စားကြသဖြင့် သစ်တို့သည် ကြောက်လန့်လျက် ဆိတ်တို့ကို အဝေးမှ မြင်လျှင်ပင် တောချုံရှိရာသို့ ပြေးကြကုန်၏။
နောင်အခါ တရား မစောင့်သော မင်းတို့ လက်ထက်၌ အမျိုးယုတ်သော သူတို့ အစိုးရ ကုန်သည် ဖြစ်၍ အမျိုးမြတ်သူတို့ မထင်ရှား ဖြစ်လတ္တံ့။ အမျိုးယုတ်သူတို့မှာ မင်းကျွမ်းဝင်သည် ဖြစ်၍ တရားရုံးတို့၌ သြဇာအာဏာ လွှမ်းမိုးလျက် အမျိုးမြတ်သူတို့၏ ဘိုးဘပိုင် လယ်မြေ ဥစ္စာ အရပ်ရပ်တို့ကို ငါတို့ လယ်မြေဥစ္စာ ဖြစ်သည်ဟု သိမ်းယူကြ၍ တရားတဘောင် ဖြစ်လျှင် တန်ခိုးမဲ့သူတို့အား ဖိနှိပ်ပုတ်ခတ် ခြိမ်းခြောက် နှင်ထုတ်လျက် အနိုင်ကျင့် ကြကုန်လတ္တံ့။ ထိုအခါ အမျိုးမြတ်သူတို့ ကြောက်လန့် စက်ဆုတ်ကုန်သည် ဖြစ်၍ လယ်ယာ ဥစ္စာတို့ကို ပေးအပ်ကုန်လျက် အိမ်သို့ပြန်၍ အိပ်နေကြကုန်အံ။
ထိုမှ တပါးလည်း အကျင့်သီလရှိသော ရဟန်းတို့သည် အကျင့်သီလမဲ့သော ရဟန်းတို့က ချုပ်ချယ် ဖိနှိပ်ကြလေသဖြင့် တောသို့ ပြေးဝင် ပုန်းအောင်း ကြကုန်လတ္တံ့။ ဤသို့လျှင် အမျိုးကောင်း၊ သူတော်ကောင်း တို့လည်း လွတ်ရာ ကျွတ်ရာ တောတောတောင်တောင် တို့ကို ပြေးပုန်းကြကုန်လတ္တံ့။
အမျိုးသား ပညာဝန် ဦးဖိုးကျား၏ ငါးရာ့ငါးဆယ် ကောက်နုတ်ချက်များ (ပထမတွဲ)
Categories Buddha Words and Knowledge Tags 04 Post navigation
(၄-၅-၂၀၂၀) ရကျနေ့၊ နံနကျ (၇:၀၀) နာရီ COVID-19 ရောဂါစောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ သတငျးထုတျပွနျခွငျး